Xasan Abshir: Ma Aanan Geeriyoon ,waan Noolahay – Radio Daljir
Nofeembar 1, 2015 3:33 b 0
Axad, November 01, 2015 (Daljir) — Xasan Abshir Faarax oo dhowaan iska casilay xilka Xildhibaanimadda Baarlamaanka Soomaaliya ayaa beeniyay inuu ku dhintay weerarkii kooxda Al-Shabab ku qaaday saakadii hore Hotel Saxafi ee magalada Muqdisho.
Ex-Xildhibaan Abshir Faarax oo hadda ku sugan magalada Nayroobi ayaa warbaahinta u sheegay inay been tahay wararka qaar ka mid ah warbaahintu ka qortay kaasoo ah inuu ka mid ahaa dadkii weerarkaa ku dhintay waxa kale uu sheegay in lasoo wacay loona xog waramay xaalada Hotelka qabsatay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa weerarka Hotelka ku eedaysay kooxda Al-Shabab oo dagaal u dhaxeeyo, waxana jira masuuliyiin iyo shacab weerarka ku dhintay kuwaasoo qaarkood si weyn loo yaqaanay.
Tirada dhimashada oo lagu sheegay 12-qof ayaa laga yaabaa inay ka badato intaa, marka loo eego xaalada dadkii ku dhaawacmay qaarkood oo laga dayrinayo.
Magalada Muqdisho waxaa ku sugan masuuliyiin ka socda mamulada dalka ka jira, kuwaasoo shirar u yimi, mana jirto ilaa iyo hadda warar sheegaya in masuuliyiintaasi wax kasoo gaaray weerarka dagaal yahano ka tirsan Al-Shabab ku qaadeen Hotel Saxafi.